Rosia: Ireo Hagaigen’ny Ministera Tao Amin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Nandika (en) i Siân Sinnott
Voadika ny 03 Jolay 2011 11:15 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, русский
Ny Ministera Rosiana misahana ny Raharaham-Bahiny (MVD) dia vao avy nanomboka fanentanana tao amin'ny Aterineto, ary tato anatin'ny tapa-bolana dia hetsika goavana roa no nahasarika ny saina tamin'ireo hetsika nataon'ny Ministera.
Ny vondrona VKontakte
Ny 18 May 2011, ny MVD dia nanambàra ny fanangànana vondrona ofisialy iray [ru] ho an'io departemanta io ao amin'ilay tambajotra sosialy be mpahalàla VKontakte, vohikala mitovitovy amin'ny Facebook.
Ny mpandrindra an'io vondrom-piarahamonina io dia mampiasa ny solonarana Uncle Styopa, mpilalao iray, izay natosiky ny sariitatra sy ny boky Sovietika, isan'ny iray nandalo taranaka Rosiana maro. Ny tanjon'ilay vondrona, raha araka ny voalazan'ny pejy mombamomba azy dia ny “hampiray ireo rehetra manana ifandraisana amin'ny polisy, ny mpitandro filaninana anatiny sy ny sampana hafa ao amin'ny MVD ao anatin'ny Federasiona Rosiana, na izay liana amin'ny asan'izy ireo.”
Sary avy amin'ny vondrona ofisialin'ny MVD tao amin'ny vohikala "Vkontakte". Mibaky toy izao ny teny ery an-tampony: "Miasa ambanin'ny lalàna. Manompo ny vahoaka izahay", ary ny eo ambany dia: "Ny Ministeran'ny Atitany ao amin'ny Federasiona Rosiana".
Na izany aza, ao anatin'ireo fanamarihana napetraka ho an'ny masoivohom-baovao Itar-Tass dia niteny ny solotena iray avy amin'ny MVD [ru], fa ny tanjon'ilay vondrona dia ny “handrindra fantsom-baovao sy fifandraisana vaovao mihitsy izay hahafahana manana fifaneraserana amin'ireo olona tsy dia manan-draharaha loatra amin'ireo fantsom-baovao nentin-drazana, toy ny fahitalavitra, fampielezam-peo ary ny vaovao an-tsoratra fa misafidy kosa ny handray ny vaovaony amin'ny alalan'ny tambajotra sosialy mamin'ny fon-dry zareo.”
Roa arivo sy iray alina eo sahady ireo olona niditra ho ao amin'ilay vondrona tao anatin'ny fotoana fohy monja. Hatreto ny fisongan'ny isan'ireo mpikambana ao amin'ilay vondrona dia tsy dia nahaliana firy: ireo faham-baovao ofisialin'ny hetsiky ny MVD dia naverina navoaka tamin'ny endrika fitanisàna nalaina avy tao amin'ny vohikala tena niandohana, na ny masoivohom-baovao, tamin'ny teny hafa tsy nasiana fanamboamboarana ny fomba fiteny, mba ho sahaza ny tanora mpanjifa azy. Ohatra: “The Realisation of Composite [Investigative] Measures”; io fiteny io izay tsy misy lanjany loatra raha resaka fiseraserana miaraka amin'ny mpanjifa aterineto, ary latsaka lavitra noho izay aza eo anivon'ireo tanora mpampiasa ny Vkontakte.
Indrisy, ny tsy fisian'ny votoaty tsy manam-paharoa dia sahala amin'ny tsy fahafahana mihazona ireo mpanjifa izay efa voahangona hatreto, na hoe hisarika ny fahalinan'ireo mpikambana vaovao.
Na izany aza, ny solotenan'ny MVD dia niteny ny mifanohitra amin'izay: “Ny fisafidianana ny fitaovana sosialy izay fototry ny fanangànana ilay vondrona dia tsy kisendrasendra mihitsy. Amin'ny fampiasàna ny fitenin'ny tanora, ny fehezanteny iombonany sy ny fomba firesany ary ny toetra mientanentana, ny ministera dia nahazo ny fanohanan'ny tanora sy ny ampahany tena mavitrika amin'ny vahoakan'ny firenena satria, raha aravona, ny salan'isan'ireo mpampiasa ny “Vkontakte” dia 18 hatramin'ny 25 taona.”
Fikarohana natao tao amin'ny biraon'ny mpamorona ny police-russia.ru
Ny androtr'io ihany, 18 May, hetsika roa no nitranga izay nisy ifandraisany amin'ny aterineto sy ny MVD. Ny Sampan-draharahan'ny Filaminana Anatiny ao amin'ny MVD dia nanao fisavàna tao amin'ny biraon'ny Inspektera Lehiben'ny Departemantan'ny Fandrindràna ny Fandaniana eo anivon'ny Governemanta ao amin'ny MVD Rosiana, tompon'andraikitra ambony ao amin'ny polisy Rosiana antsoina hoe Dmitri Vorobyev.
Raha ny filazan'ny lehiben'ny Departemanta'ny Fiarovana Anatiny ao amin'ny MVD (jereo ato ny baiko ofisialy nampanao ny fisavàna), “dia nanangana vohikala iray antsoina hoe police-rassian.ru i Vorobyev, mba hanoherana ny vohikala ofisialin'ny MVD Rosiana” ka ao, araka ny ambaran'i Draguntsov, “. Ilay vohikala dia nanazava ny tena asan'ireo zana-tsampana samihafa ao amin'ny MVD Rosiana, zavatra izay tsy tokony havoaka mihitsy any aminà loharanom-baovao mora idiran'ny rehetra, ary manakiana ny asan'ny Ministera amin'ny fomba manorisory”.
Ireny tohan-kevitra ireny no fototry ny fanapahan-kevitra nampanaovana fisavàna ny birao fiasàn'i Dmitri Vorobyev, izay, amin'ny endriny rehetra, dia natao mba hitadiavana ‘porofo’ fanampiny momba ilay tranga mikasika heloka bevava hoe nataony.
Tao anatin'ny famèrana ny fikarohana nampanaovina ny polisy ny asa “fisavàna, fandinihana sy fandraofan-javatra”, tafiditra anatin'izany ireo fitaovana elektronika, antontan-taratasy mifandray amin'ny fanaovana asa tsy ara-dalàna, izay raha adika amin'ny fomba fiasa efa fanao dia ny fakàna ny disque dur ao anaty solosaina, sy izay disques na fitaovana media hafa rehetra hatramin'ny taratasy sy boky, izay matetika no tsy misy ifandraisany akory amin'ilay raharaha. [Miteny ny zavatra niainan'ny maro amin'ireo namako izay niharan'ny fisavàna noho ny resaka extremisme ara-politka aho eto]
Ampahany amin'ilay fanomezan-dàlana ny polisy hanao fisavàna. Dikasarin'ny fàfana tamin'ny Police-Russia.ru.
Ny zavatra tena mahaliana dia ity, ilay vohikala voarohirohy amin'ity fanapahan-kevitra ity raha ny marina dia tsy miasa eo ambanin'ny anaran-tsehatra police-rassian.ru.
Dmitri Vorobyev, raha ny marina, dia mpamorona ny sehatra fifanakalozan-dresaka ao amin'ny police-russia.com [ru], izay hita koa ao amin'ny sehatra police-russia.ru, police-russia.com, militia-russia.ru.
Ilay olona nanoratra ny fanomezan-dàlana hisava izany dia tsy afaka akory nanondro mazava araka ny tokony ho izy ny anaran'ilay vohikala. Ary tonga hatrany amin'ny fanaovana hadisoana hafa tamin'ny fanoratana ny anaran'ny firenena – hadisoana faharoa tao anatin'ilay taratasy.
Efa nisy hatry ny ela ny sehatra fifanakalozan-dresaka police-russia.com ary toerana iray be mpahalala sy fampiasan'ireo mpiasan'ny MVD ary ny mpiasa hafa ao amin'ny mpitandro filaminana mba hiresahana sy hfanakalozana fomba fijery. Matetika no misy olon-tsotra mandray anjara amin'ireo fifanakalozan-dresaka, toy ireo izay nanaraka ny Diaben'ny Tsy Fitoviam-pijery tamin'ny 2006 sy 2007, izay niafara tamin'ny famoretana an-kerisetra an'ireo mpanao fihetsiketsehana.
Nisy fifanakalozan-dresaka goavana teraka tao amin'ilay sehatra, teo amin'ireo mpiasa ao amin'ny Sampana Manokan'ny Polisy (OMON) ary ireo mpanao diabe izay niezaka ny hiady hevitra hoe nahoana no mbola misy foana ny famoretana, na izany aza dia mpanara-dàlana ry zareo ary manao ny asany ihany koa ireo mpiasa avy amin'ny mpitandro filaminana mandritra ny famoretany. Ity fifanakalozan-dresaka ity (izay indrisy fa nesorina tao amin'ilay sehatra fifanakalozan-dresaka[ru] ) dia tena nanana ny lanjany tokoa sy naneho fa ireo mpanao fihetsiketsehana dia afaka niresaka mivantana tamin'ireo izay nahazo baiko hidaroka azy.
Mahaliana ny hoe ity sehatra fifanakalozan-dresaka ity dia nanjary toerana iray namoahana ireo ahiana ho kolikoly sy fandikàn-dalàna eo anivon'ny MVD. Anatin'izay indrindra, tamin'ny 22 Aprily 2011, nivoaka ny tsilian-tsofina “Kolikoly ao amin'ny Sampana Tohana ao amin'ny MVD”, taorian'ny antso [ru] nataon'ireo mpiasa ho an'ny mpitarika ny Sampana Tohana manerana ny firenena miaraka amin'ny resaka momba ireo vola an-davitrisa voahodinkodina tamin'ny alalan'ireo fifanarahana fandaniana nataon'ny governemanta ho an'ny filàn'ny MVD.
Fifandraisana amin'ny vahoaka ‘mijidina’ vs fandraisan'andraikitra miainga avy ifotony
Ity misy fanamarihana [ru] iray, avy aminà mpiasa amin'izao fotoana ao amin'ny MVD sady mpandray anjara ao amin'ilay seha-pifanakalozan-dresaka, mikasika ny fanomezan-dàlana hanao fisavàna ary ny fiezahana hamadika ho lasa heloka bevava ilay raharaha ifanolànana amin'ilay mpamorona ny seha-pifanakalozan-dresaka :
Tsy manohitra velively ny lalàna velona ny fananganana ny seha-pifanakalozan-dresaka mba ho tsindrin'entan'ny vohikala ofisialin'ny MVD. Tsy ny hamafy lainga na zavatra manafintohina mifandraika amin'ny Foiben'ny Filaminana ao amin'ny MVD no tanjon'ilay seha-pifanakalozan-dresaka. Ny isam-batan'olona manely zavatra toy izany dia tompon'andraikitra amin'izany na taiza na taiza vohikala namoahana azy. Amin'izany, tsy azo raisina ho tompon'andraikitra mihitsy ny mpamorona ilay vohikala amin'izay teny manafintohina rehetra na soratra napetrak'ireo mpampiasa ilay vohikala. Tadiavo ireo izay nanely izany. Misy fanazavàna iray momba ny fomba fiodin'ny zana-tsampana ao amin'ny MVD azo vakiana anaty bokin-dalàna, fanadihadiana momba ny heloka bevava, ny asa fitantànana ao amin'ny MVD , sns. Tafavoaka tsy nahy tao amin'ilay vohikala ireo zavatra saropady sy tsiambaratelon'ny governemanta talohan'ny namafàn'ny tao amin'ny fitantanana azy haingana.
Ny fangaraharàna, araka izay foto-kevitra iasan'ny governemantantsika rahateo, dia iray amin'izay voasoratra ao anaty lalàna sy Lalàmpanorenantsika mikasika ny asan'ny governemanta. Ny fanafoanana ny mangarahara dia fanohinohinana mivantana ny fototra araka ny lalàna ijoroan'ny firenena misy anao. Fanapahan-kevitra mivaona amin'ny lalàna ny anareo. Tianay ny mampahafantatra anareo fa ireo mpampiasa an'ity seha-pifanakalozan-dresaka ity dia tsy hoe fotsiny mpiasa ao amin'ny MVD fa sady olom-pirenena tsotra ihany koa, ireo mpampahalala vaovao ho an'ny daholobe ary ny solombavambahoaka avy ao amin'ny Douma izay miasa ho an'ny governemantan'ny Federasiona Rosiana sy ny Lalampanorenany. Ireny ezaka tsy araka ny lalàna hanakatonana seha-pifanakalozan-dresaka ireny na hanaovana antsojay ny mpamorona azy dia mety hanosika ny vahoaka hitodika any amin'ny Lehiben'ny Fampanoavana, ny Douma, ny Filohan'ny Federasiona Rosiana, ireo fikambanana iraisampirenena, ahitàna fihetsehana ho fanoherana avy amin'ireo vondrona sy antokon'olona. Miantso anareo aho mba tsy hanao zavatra tsy araka ny lalàna. Ny fanàmbinareo hitady làlana hitondra mankany amin'ny fifanakalozan-kevitra izao no mila apetraka.
Nahaliana tokoa ny fanehoan-kevitr'ireo mafàna fo tao amin'io seha-pifanakalozan-dresaka io mikasika ny ezaka ho fanakatonana azy sy ny tsindry aloka natao tamin'ny mpamorona azy. Làlana iray ho hetsika enti-manohitra an'izay dia nanomboka niresaka ny amin'ny hanangànana ilay seha-pifanakalozan-dresaka ho lasa fikambanana tsy mitady tombontsoa ara-bola ireo mpandray anjara, ka tafiditra anatin'izany ireo mpiasa taloha tao amin'ny MVD. Iray amin'ireo mpampiasa ilay seha-pifanakalozan-dresaka i Plastun nanoratra hoe [ru]:
Miaraka aminà hetsika fanoherana tahaka izany dia mety ho mora kokoa ny manàkana [ny eritreritra hanakatonana], satria ny fikambanana toy izany dia afaka hiaro ny zon'ireo mpikambana ao aminy amin'ny fiarovana ny tombontsoan'izy ireny manoloana ny ambaratongam-pahefana voafaritry ny lalàna, ary ny fiarovana ny zon'ireo mbola amperinasa, izay mbola amperinasa amin'ny fanangonana ireo filazàna fa hoe fandikàn-dalàna ary misolo tena azy ireny amin'ny fametrahana fitarainana.
Ho setrin'io, mitondra fanazavàna ny mpamorona ilay seha-pifanakalozan-dresaka [ru] “Azoko lazaina fa efa andalam-pandinihana io hevitra io”.
Dia inona no vokatra ho azontsika amin'izany? Vondrona iray tsy mahaliana sy mankaleo ao amin'ny tambajotra sosialy Vkontakte, natsangan'ny rafi-pitantanan'ny MVD ary ezaka fanakatonana sy faneriterena ilay seha-pifanakalozan-dresaka navitribitrika sy nafanain'ireo mpiasan'ny MVD. Indrisy, fomba fanao miparitaka be eo amin'ny rafi-pitantanana io, ary iray amin'ireo mpandray anjara i Begemot no nanamarika hoe [ru]:
Misy departemanta atao hoe PR ao amin'ny polisy ao. Rafitra iray matanjaka be misy mpiasa an-jatony io, manana teti-bolam-pandaniana sy karama natao ho azy manokana ary manana, raha kely indrindra, manampahaizana manokana roapolo hatramin'ny telopolo misahana fotsiny ny fitantànana ny endrika ivelan'ny MVD eo anivon'ny aterineto. […] Taminà fotoana iray dia nisy Lietnà-kolonely iray [Vorobiev] nanangana vohikala iray namondronana ireo vondron'olona nitovy fijery taminy, taminà tetibola zara raha nisy (miohatra amin'ny ministera) ary lasa TSINDRINENTANA ilay vohikala ho an'ilay vohikala mankaleon'ny MVD, izay mandany vola… saingy ekena fa tsy miresaka mikasika ny vola isika na dia izay aza no tena olana eo an-tànana. Olona no olana izao. Ary olona matihanina. […] Olona matihanina isan'ny sangany izay azo ambara ho nifaninana samirery sy tsy nisy tetibola akory, nifaninana tamin'ny departemanta iray manontolo ao amin'ny MVD!